Xildhibaano: Afar wasiir ma aqbali doono mana ugu naxariisan doono RW Cumar Cabdirashiid! – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Xildhibaanno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa kasoo horjeestay xukuumadda cusub ee xalay saqdhii dhexe uu magacaabay RW Cumar C/rashiid Cali Sharmarke.
Xildhibaanadan oo ahaa kuwii taagreesanaa RW hore C/weli Sheekh Axmed Maxamed ayaa xusay iney diidanyihiin 4 ka mid ah xubnaha Golaha Wasiirada ee xalay la magacaabay.
Xildhibaan Cabdi Axmed Dhuxuloow oo Kulanka ka dib la hadlay Idaacada VOA ayaa sheegay in ay tiro ahaan gaarayaan 122 Xildhibaan islamarkaana ujeedka kulankoodu uu ahaa in ay qaadacaan Magacaabista Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya uu xalay sameeyay.
“RW Cumar waxaan ku ballanay inuu soo dhiso xukuumad loo wada dhan yahay oo ay xubno ka yihiin dad karti leh oo aan horay u fashilmin” ayuu yiri Xildhibaan Cabdi Dhuxulow.
“Wax isbadalay ma leh wasiiraddii hore ee fashilmay ayaa la keenay, C/wali Sheikh Axmed ayaa ka maqan oo kaliya, Ra’iisul Wasaaraha hadii uu balanta nooga baxay anagana waan uga baxeynaa oo Ma ansixin doono Xukumaddisa” ayuu yiri Dhuxuloow.
“Waxaa meesha lagu soo daray C/kariim Xuseen Guuleed oo horay u shaaciyey inuu fashilmay, waxaa sidoo kale lagu soo daray C/llaahi Maxamed Cali (Sanbaloolshe) oo xildhibaano xiray markuu ahaa Agaasimaha Nabad Sugidda, madax qaranna aflagaadeeyey, Faarax Sheekh C/qaadir oo dagaalkii uu sameeyey xukuumaddii hore lagu riday iyo Xuseen Cabdi Xalane oo xukuumado hore oo uu wasiir ku ahaa maaliyadda ku fashilmeen” ayuu yiri Xildhibaan Dhuxulow.
Wuxuu ku adkeystay xildhibaankaan ineysan marna ugu naxariisan doonin RW Cumar C/rashiid wasiirada afarta ah ee uu sheegay iney fashilmeen.
Xildhibaanka ayaa xusay ineysan diyaar u aheyn iney codka kalsoonida siiyaan xukuumadda cusub haddii baarlamaanka la horkeeno, haddey ay yihiin Kutladda ka kooban 122 xildhibaan.
Wuxuu sidoo kale, xildhibaanku sheegay in xukuumadda lagu soo celiyey wasiiradii yiri waan shaqey weynay ee golaha wasiirada hala rido, taasna aysan qaadan doonin.
Xildhibaanada Baarlamaanka ee ku bahoobay Kutlada loogu magac daray “Ilaalinta iyo Badbaadinta Qaranka” ayaa shalay sheegay in Ra’iisul Wasaaraha uu uga baxay ballantii ay ku ansixiyeen oo aheyd inuu soo dhiso dowlad wadaag ah oo aysan ku jireen rag ay sheeegeen iney caqabad ku yihiin xukuumad kasta.